Izindaba - Uyini umehluko phakathi kwamagilavu ​​e-nitrile namagilavu ​​e-latex?
Umehluko phakathi kwamagilavu ​​e-nitrile namagilavu ​​e-latex ulele ikakhulu ezintweni ezahlukahlukene nasezakhiweni ezahlukahlukene zokuvikela zemikhiqizo. Endaweni ekhethekile, abasebenza ngokulimala bagqoke ngokungafanele izinto zokuzivikela noma ukuvikelwa okunganele, futhi eminye imiphumela ibe mibi kakhulu.
Umehluko phakathi kwamagilavu ​​e-nitrile namagilavu ​​e-latex
Amagilavu ​​eNitrile yigama elivamile lamagilavu ​​e-nitrile, injoloba eyisihluthulelo sokwenza okuluhlaza okwenziwe ngama-organic synthesis kanye nemithi yokuxhumanisa. Amagilavu ​​wokuvikela ahlanganiswa ikakhulukazi kusuka ku-acrylonitrile ne-butadiene. I-nitrile: isigaba samakhemikhali aphilayo anephunga elikhethekile futhi abola lapho evezwa ama-asidi noma izisekelo.
Amagilavu ​​e-Latex, abizwa nangokuthi amagilavu ​​enjoloba, i-latex yinto yemvelo, ethathwe kusiphuzo sesihlahla senjoloba. I-latex yemvelo ingumkhiqizo we-biosynthetic, futhi ukwakheka kwayo kanye nesakhiwo se-colloidal kungahluka kakhulu ngenxa yokwehluka kwezinhlobo zezihlahla, i-geology, isimo sezulu, nezinye izimo ezihlobene. Kuma-latex amasha angenazinto ezingeziwe, ama-hydrocarbon wenjoloba abamba kuphela u-20-40% wengqikithi, okusele kube inani elincane lezinto ezingezona ezenjoloba namanzi. Phakathi kwezingxenye ezingezona ezenjoloba kukhona amaprotheni, i-lipids, ushukela nezinto ezingaphili, okuyingxenye yakha isakhiwo esiyinhlanganisela nezinhlayiya zenjoloba bese incibilika ngokwamasondo noma yakha izinhlayiya ezingezona ezenjoloba.
Amagilavu ​​e-butyl aqinile, awanweki kancane, ukumelana nomhuzuko okungcono, ukumelana ne-acid ne-alkali (amanye amagilavu ​​e-butyl awakwazi ukuvimbela i-acetone, i-alcohol eqinile), i-anti-static, futhi ayikhiqizi ukungezwani komzimba nesikhumba, elungele ukuthambekela kokungezwani komzimba nesikhathi eside gqoka.
Amagilavu ​​e-Latex uma kuqhathaniswa namagilavu ​​e-nitrile, ukuqina nokuqina kokulimazeka kuncane kakhulu, kepha ukuqina okungcono, ukumelana nomhuzuko, ukumelana ne-acid kanye ne-alkali, i-grease ne-nitrile gloves uma kuqhathaniswa nokubi kakhulu, ukumelana ne-acid ne-alkali kungcono kakhulu kune-nitrile, kepha ayifanele isikhumba somzimba kanye nokugqoka isikhathi eside.
Izinzuzo nezinkinga zamagilavu ​​e-nitrile kanye namagilavu ​​e-latex
Nitrile amagilavu ​​impahla NBR, nitrile amagilavu ​​iraba zokwenziwa, izingxenye eziyinhloko acrylonitrile futhi butadiene. Izinzuzo zamagilavu ​​e-nitrile aziphikisi, ziyawohloka, zingangeza izingulube, imibala ekhanyayo; Okubi kukhona ukuqina okumpofu, intengo iphakeme kunemikhiqizo ye-latex, izinto ze-nitrile zingcono kakhulu kune-latex chemical ne-acid nokumelana ne-alkali, ngakho-ke kuyabiza.
Izinto zegilavu ​​zeLatex yi-latex yemvelo (NR), inzuzo ukuqina okuhle, kuyahlehliseka; Okubi ukuthi abanye abantu bayaphikiswa.
Ukwethulwa kwamagilavu ​​enjoloba we-nitrile.
Amagilavu ​​enjoloba weNitrile awohlobo oluthile lwamagilavu ​​okuvikela amakhemikhali, impahla yawo eyinhloko injoloba, eyakhiwe nge-acrylonitrile ne-butadiene. I-Nitrile (jīng) - isigaba samakhemikhali aphilayo anephunga elithile elibola lapho livezwa ama-asidi noma izisekelo. Amagilavu ​​werabha we-nitrile asebenza kahle kakhulu ayinhlanganisela enhle kakhulu yamandla womshini nokumelana namakhemikhali.
Kukhona uchungechunge lwezinto ezilahlwayo, ezingahlelwanga futhi ezinolayini ngemikhiqizo ehlukene, amagilavu ​​angabuye ahlukaniswe abe yizinhlobo ezimbili zempuphu ne-non-powder, ubukhulu obusukela ku-0.08 kuye ku-0.56mm, ubude busuka ku-24 kuye ku-46cm. amagilavu ​​enirabha enerabha ngenqubo yokwengeza okokusebenza okuyi-anti-static (i-glue) ukufeza izidingo ezibekiwe zokusebenza okuyi-anti-static, kanti ukwakheka akuqukethe ama-protein allergen, wonke amagilavu ​​e-nitrile enjoloba kubantu Akukho ukusabela okweqile esikhunjeni somuntu. 1.
1. ukumelana okuvelele kwamakhemikhali, ngokumelene nezinga elithile le-asidi ne-alkalinity, izincibilikisi, i-petroleum nezinye izinto ezonakalisayo ukunikeza ukuvikelwa okuhle kwamakhemikhali. 2.
2. izakhiwo ezinhle zomzimba, okuhle anti-izinyembezi, anti-ukubhoboza, anti-ukungqubuzana izakhiwo. 3.
4. ayiqukethe amaprotheni, amino compounds nezinye izinto eziyingozi, kuyaqabukela kukhiqize ukungezwani komzimba. 5.
Isikhathi esifushane sokucekelwa phansi, okulula ukusiphatha, esivumayo ekuvikelweni kwemvelo. 6.
6. ayikho ingxenye ye-silicon, enokusebenza okuthile okulwa ne-static, efanelekile kwizidingo zokukhiqizwa komkhakha we-elekthronikhi. 7.
7. Izinsalela zamakhemikhali eziphansi phezulu, okuqukethwe kwe-ionic ephansi nokuqukethwe kwezinhlayiyana ezincane, ezifanele imvelo ehlanzekile eqinile yegumbi.
Umkhiqizo usetshenziswa kakhulu embonini yokudla (izinkukhu, inyama, ukuphatha imikhiqizo yobisi), ukuhlanza indlu, imboni ye-elekthronikhi (ibhodi lesifunda, i-semiconductor neminye imisebenzi), imboni ye-petrochemical, imboni yezokwelapha neyezempilo, njll.
Ngemuva kokusebenzisa, udinga ukwenza umsebenzi omuhle wokuphinda usebenzise amagilavu ​​ukuze ukwazi ukusebenzisa kabusha amagilavu.
1. Ngemuva kokuhlanza, sebenzisa isikhwama esihlanzekile noma ibhokisi elivalekile ukugcina ukuvimbela ukungcoliswa kothuli nokubhoboza izinto ezicijile.
2. Beka endaweni enomoya futhi eyomile ukugwema ukuphuzi kwamagilavu ​​okubangelwe wukukhanya okulula.
3. Zilahle okokuqala, njengokupakisha ulahle noma usebenzise kabusha umfaniswano nokuhlanza.